<º Gamer: fananganana mpizara Counter Strike (sy ny hafa) | Avy amin'ny Linux
Izy ireo dia Rohy | | GNU / Linux, Games, Tambajotra / seriver, Tutorials / Manuals / Tips
Nandritra ny indostrian'ny lalao video dia nisy lohateny maro izay niakatra tamin'ny lohatenin'ny ankamaroan'ny nilalao tamin'ny Internet na tamin'ny tambajotra. Counter Strike Iray tamin'ireny, ankoatry ny nilalao indrindra tamin'izany fotoana izany, ankoatry ny hafa noho ny cybercafé, izay ahafahanao milalao an-tserasera amin'ny olona ao amin'ny manodidina. Nihetsika kely tamin'ny faniriana aho, nanapa-kevitra ny hanangana mpizara iray hilalao lalao vitsivitsy amin'ireo namako. Ity lahatsoratra ity dia ampiasaina amin'ny lalao hafa izay mampiasa maotera mitovy, toy ny Half Life, CS: Condition Zero, Team Fortress, sns. Ho fanampin'izay dia hampianariko koa ny manampy Amx Mod X, famenoana izay ahafahantsika manatsara ny traikefa amin'ny lalao sy ny fitantanana. Mbola mianatra momba an'io aho, koa andramo ny mamaly ny fanontanianao rehetra.
Alohan'ny hanombohantsika dia mila izao manaraka izao isika:
Steam (Tsy ilaina ny miditra, alaivo apetraka fotsiny dia noforonina ilay fampirimana .etona ao amin'ny folder HOME)
lib32-gccl (raha 32 bit ny rafitray)
Raha vantany vao tafapetraka ny ilaina dia miroso amin'ny fisintomana ny script izay hikarakara ny zava-drehetra izahay (fametrahana, fanaraha-maso, fanatanterahana, sns.). Mba hanaovana izany dia manatanteraka ireto baiko manaraka ireto izahay:
Rehefa afaka kelikely (miankina amin'ny fifandraisana internet) dia efa alaina daholo izay ilaina rehetra ary hangataka aminay ny anaran'ny mpizara sy ny teny miafin'i rcon izy io, ilaina hifehezana ny mpizara avy amin'ny faran'ny lalao.
Vantany vao vita isika dia afaka manandrana mihazakazaka ny mpizara ary manokatra ny lalao ary manandrana fa hita ao amin'ny lisitry ny mpizara LAN izany. Noho izany dia manatanteraka izahay:
hanombohana azy amin'ny fomba debug hahitana ny tsy fahombiazana sns.
Mba hampifanarahana ny mpizara dia hanova rakitra 2 izahay: csserver y serverfiles / cstrike / cs-server.cfg
Ilay voalohany, izay efa namboarinay teo aloha, azonao atao ny manova ny masontsivana fanombohana mpizara toy ny IP, sarintany fanombohana, isan'ny mpilalao faratampony ary seranan-tseran'ny serivera (na dia tsara kokoa aza ny mamela azy ireo aorinao). Azontsika atao ihany koa ny mampandeha fampandrenesana mailaka ary miditra ao amin'ny kaonty Steam. Ny andalana mahaliana antsika izao dia:
Ny IP ao amiko dia ilay IP nomen'i Hamachi ahy, satria raha ny amiko dia tsy tiako ho hita ao anaty lisitry ny mpizara ity lalao ity, eo amin'ireo namako ihany.
Ankehitriny dia manohy manokatra serverfiles / cstrike / cs-server.cfg izahay
Hahita masontsivana marobe isika, saingy hifantoka amin'ireo, izay efa noresahina ihany koa.:
Ny isan'ny masontsivana izay anohanan'ny mpizara, indrindra raha ampiantsika AMX Mod X dia lehibe dia lehibe. Amin'ny faran'ny lesona dia avelako rohy vitsivitsy misy fampahalalana mahasoa.
Hataoko izay nampidiriko:
Mba hanafoanana safidy iray dia afaka mamafa ny tsipika isika na mametraka // amin'ny fiandohan'ny tsipika.
Ary raha tiantsika ahodina ny sarintany isaky ny vita io dia hanonta ny rakitra serverfiles / cstrike / mapcycle.txt ary ampio ary esory ny isa ny sarintany tadiavinay.
Ary miaraka amin'izany rehetra izany isika dia manana ny fototra hananana ny mpizara.
Fametrahana AMX Mod X
AMX Mod X dia ahafahantsika manampy trosa vaovao amin'ny mpizara anay, toy ny fandroahana sy / na fandrarana ireo mpampiasa, ny fahafaha-manamboatra ny sarintany tsirairay (ohatra, haharitra ela kokoa, hanombohana vola bebe kokoa na kely, sns). Amin'ny tranokalany ihany koa isika dia afaka mahita lisitry ny script tsara, toy ny rafitra iray hifidianana ny sari-tany manaraka alohan'ny hiafaran'ny sarintany, feo vaovao, sns.
Izahay dia mandevona ny anao misintona pejy web ary midina isika AMX Mod X Base ho an'ny Linux ary Metamod. Addon Tsy voatery izany fa manampy ny fampisehoana ny statistikan'ireo mpilalao eo amin'ny efijery.
Ao anatin'ilay fampirimana serverfiles / cstrike mamorona fampirimana antsoina hoe izahay addons ary esory ao anatiny ireo fisie alaina.
Hanitsy ny fisie izahay izao libslist.gam izay hita ao amin'ny serverfiles / cstrike.
Manoro hevitra backup aho alohan'ny hanovana azy raha sendra manao fahadisoana isika rehefa manitsy azy io na taty aoriana dia maniry ny hamafana azy
Izahay dia mitady ireto andalana ireto:
ary ovainay ho:
Ankehitriny dia hiezaka ny hanomboka ny mpizara miaraka amina debug parameter izahay hanamarinana fa manomboka tsara izany. Raha tsy izany dia zahao raha marina ireo zotra etsy ambony.
Ankehitriny mba hampavitrika ny AMX dia mamorona ilay rakitra izahay serverfiles / cstrike / addons / metamod / plugins.ini ary ampianay ity andalana manaraka ity:
Ary miaraka amin'izany dia efa nametraka ny AMX Mod X.
Ankehitriny mba hamaranana dia hanampy mpitantana iray izahay hahafahana manamboatra azy amin'ny lalao console.
Ho an'ity dia hanova ny fisie izahay serverfiles / cstrike / addons / amxmodx / configs / users.ini Ao amin'ireo rakitra dia manondro ny safidy rehetra. Toy ny amin'ity tranga ity dia liana amin'ny famoronana iray miaraka amin'ny alalana rehetra izahay amin'ny faran'ny fisie ampidirinay:
Amin'ity tranga ity dia mila izany koa isika rehefa miditra amin'ny mpizara dia mandefa ny teny miafina. Manitsy ny fisie noho izany izahay config.cfg izay hita ao amin'ny fampirimana lalao (amin'ny tranga misy ahy ao amin'ny Steam / SteamApps / mahazatra / Half-Life / cstrike / config.cfg) ary ampianay ity andalana manaraka ity:
Ary miaraka amin'izany dia efa manana ny zavatra rehetra ilaintsika amin'ny fikirakirana fototra isika.
Manomboka ny mpizara izahay ary manomboka amin'ny lalao rehefa miditra ny mpizara dia manokatra ny terminal izahay (ao español raha tsy izany dia ny lakileny º) ary manorata:
ary miverina amin'ny lalao izahay (tsindrio Esc) ary tsindrio fotsiny ilay isa voatondro handehanana amin'ny menio mankany amin'ny menio. Amin'ny alàlan'ny default dia amin'ny teny anglisy ny menio, saingy azo atao ny mametraka azy amin'ny teny espaniola amin'ny alàlan'ny fanindriana ny 9, 4, 1 amin'ity filaharana ity mandra-pahatongan'ny Espaniôla ary farany 2 mba hitehirizana.
Ary hatramin'izao ny zava-drehetra. Manantena aho fa hahasoa anao ity fampianarana ity raha indray andro ianao dia sahy manangana mpizara CS anao manokana. Ao amin'ny pejy Amx MOD X dia hahita fampahalalana bebe kokoa momba izany ianao, motera fikarohana plugin ary forum ho an'ny fangatahana.
Pejy mpamorona script script: http://danielgibbs.co.uk
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » <º Gamer: fananganana mpizara Counter Strike (sy ny hafa)
Kuroro44 dia hoy izy:
Tsy hanana zavatra mitovy amin'ny Dota 2 ianao? Tena hanampy be 😉
Valiny ho an'i Kuroro44
Mahaliana, na dia mbola tsy nahomby tamiko aza ny zavatra Hamachi (efa nampiasaiko io, saingy hitako fa tsy mahazo aina ny manangana LAN virtoaly).
Tsara! .. ..mora sy haingana..mahatonga ahy hiverina any amin'ny CS! .. .. adiny maro natokana, lalao amin'ny cyber, lalao fifaninanana maro..nostalgia .. 😀
Mijanona ao amin'ny UrT foana aho .. ..tsy misy toa izany lalao izany amin'ny repo zanatany sy ofisialy .. 😛
PS: taona maro lasa izay, fony mbola nilalao CS aho ... dia nanova plugin iray aho ary nanao ny rafitra fanamarinako manokana hanana ny anaram-bosotra miaraka amin'ny teny miafina, ary mitazona ny statistika eo amin'ny mpizara nefa tsy noravan'ny mpaka tahaka sasany .. .. eny Liana izy ireo, tadiaviko izy ary esoriko (na dia tsy hanitsiana azy aza aho) dia ampitaiko amin'izy ireo.
AMX Mod X, satria efa lasa fenitra io, dia ampidirina ao amin'ilay fisie izay napetrako ny mpitantana, fa hahaliana anao ihany ny hizara azy 😀
Dia toy izany dia hoy izy:
Mbola kilasika tsara eo amin'ny namana izy io! Tena tsara, hapetrako amin'ny fitsapana izany, misaotra.
Mamaly an'i TanTan
David gonzalez garcia dia hoy izy:
Misaotra betsaka =)
Valiny tamin'i David Gonzalez Garcia
Torolàlana tena tsara. Tsy dia niova firy ny manao toy izany amin'ny csgo. Ao amin'ny http://www.dudosos.com/counter-strike/ misy torolàlana sy tetika bebe kokoa amin'ity lalao mahafinaritra ity, ho ahy ny tsara indrindra.
Fandraisana anjara tsara. Te-hanampy dingana iray fotsiny aho, izay tsy maintsy nampiasaiko.
Miaraka amin'ny IP mavitrika. Azontsika atao ny manampy ny rakitra cs-server.cfg amin'ny faran'ny, ny tsipika
__sxei_internal_ip (ny IP tsy miankina aminay) <- Ex: 192.168.1.3
ip (ny IP ho an'ny daholobe) Izay ahitan'i myip azy.
__sxei_required 1 1 hampiasa sxe 0 hanakatonana.
Ampiasao tsara ny ip.
THE_ZGUN_MILLER dia hoy izy:
Te hahafantatra aho raha toa ka misy mpampita etona mitovy amin'izany azo ampiharina amin'ny dota2 tiako hapetraka ao an-tranoko mpizara iray hahafahan'ny namako mifandray sy milalao isaky ny te hilalao izahay nefa tsy mila olona iray hamorona ny LAN lalao
Valio amin'i THE_ZGUN_KILLER